Indlela eSebenzayo yokuThumela nge-imeyile ichaziwe | Martech Zone
Indlela eyi-Smart yokuThetha nge-imeyile ichaziwe
NgoLwesithathu, nge-16 kaJanuwari 2019 NgoMgqibelo, uJanuwari 19, 2019 UDenis Zhinko
Abathengisi bathambekele ekuboneni ukwenziwa kwe-imeyile njengokhokelo kwimpumelelo ephezulu yemikhankaso ye-imeyile kwaye bayisebenzise kakhulu. Kodwa sikholelwa ekubeni indlela elumkileyo yokwenza i-imeyile ngokobuqu inika iziphumo ezingcono kwimbono yeendleko ezifanelekileyo. Sijonge ukuba inqaku lethu lityhileke kwi-imeyile enkulu endala kuthungelwano oluntsonkothileyo lwe-imeyile ukuze ubonise indlela ezisebenza ngayo iindlela ngeendlela kuxhomekeke kuhlobo lwe-imeyile kunye nenjongo. Siza kunika ithiyori yendlela yethu kwaye songeze ipinki yokuziqhelanisa nokuchaza ukuba izimvo zethu zinokuphunyezwa njani kwizixhobo ezithandwayo zokuthengisa.
Uhamba nini Ubuninzi
Kukho imiyalezo eyenzelwe bonke abathengi, kwaye ubungakanani obulingana nayo yonke indlela isebenza kakuhle kubo. Ezi zii-imeyile ezingenazibonelelo zemveliso kunye nokwenyusa okujolise kwicandelo. Umzekelo, abathengisi ababeki emngciphekweni wokusebenza kakuhle kwemizamo yabo yokuthumela ii-imeyile ezikhuthaza imikhankaso yeholide (umzekelo, ukubhengeza kwangaphambili umkhankaso woLwesihlanu oMnyama) okanye imiyalezo yolwazi kuphela (umz.
Ngolu hlobo lwe-imeyile, abathengisi akufuneki bahlolisise abaphulaphuli babo kwaye bacinge ngeendlela zokubahlulahlula-injongo yabo kukuthetha ngolwazi oluthile olufanelekileyo kubo bonke abathengi. Bonga kakhulu ixesha ngokuyila i-imeyile enye kuloo nto. Ukuqhubeka nomzekelo wephulo langoLwesihlanu oMnyama, abathengisi banokuyiqala nge-imeyile yokuqala echaza ulwazi lwendawo (umzekelo, amaxesha abekiweyo).
Ungayisebenzisa njani. Amanyathelo aphambili okuthumela i-imeyile ngobuninzi ayafana nezixhobo ezininzi zokuthengisa nge-imeyile. Masibathathe kwi-MailChimp:
Ukongeza umgca womxholo. Kunye nomgaqo ekuvunyelwene ngawo ngokubanzi wokwenza umgca wentloko ubambe, kwimeko yesibhengezo esimnyama sangoLwesihlanu, abathengisi banokuchaza umhla wokuqalisa kwephulo. Nokuba ababhalisi abayivuli i-imeyile, kunokwenzeka ukuba bawubone umhla xa bejonga ibhokisi ye-imeyile.
Ukuyila i-imeyile. Ukongeza ekwenzeni umxholo we-imeyile ngokwawo, eli nyathelo libandakanya ukubonwa kwangaphambili kwe-imeyile kubungakanani obahlukeneyo besikrini kwaye uyivavanye.
Nini ukuZenzela ii-imeyile
Siqala ukujonga ubuchule besoftware yokuthengisa ukuze sisebenzise ulwazi lwabathengi kwaye sijolise kumkhankaso we-imeyile kumbhalisi othile. Ukuya kuthi ga kwi-imeyile ngokobuqu kuyahluka kubuchwephesha, siya kwahlulahlula esisiseko esisisekoukuba abathengisi bangazilawula ngokwabo kwaye ubuwena obuphambiliApho banokufuna khona uncedo lobuchwephesha (uya kubona ukuba ulwazi lolwimi lokubhala lufunwa njani kwiLifu lokuThengisa leNtengiso ukuze kwenziwe umxholo). Ngapha koko, abathengisi banokuzibandakanya nawo omabini amanqanaba kwiziphumo ezibonakalayo.
Inqanaba elisisiseko lobuNtu
Kwinqanaba elisisiseko, ukwenziwa kwe-imeyile kugxile kuqala kunye nokuphambili ekuphuculeni amaxabiso avulekileyo. Ifanele uninzi lweentlobo zemiyalezo apho unomdla wokuthetha ngqo nomthengi njengakwiimeyile ezamkelekileyo, uphando, iincwadana.
Sinikezela abathengisi ukuba babhenele kuseto lweendlela ezilula zokufezekisa ukwenza ii-imeyile ezizezakho.
Ukunika igama lomthengi kumgca wesifundo kwenza ukuba i-imeyile ibonakale kwabanye abaninzi kwibhokisi engenayo kunye nezithembiso konyusa amaxabiso avulekileyo e-imeyile ngama-22%.
Kwangokunjalo, ukubhekisa kumthengi ngegama kumzimba we-imeyile yeyona nto yenza ukuba isandi se-imeyile sibe sesomntu ngakumbi kwaye sakhe ukuthembela kwabathengi.
Ukutshintsha igama lenkampani kwiCandelo elivela kwigama elithile kunokunika igama ukonyuka ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-35 kwiirhafu ezivulekileyo. Ityala elinokubakho kule ndlela lithumela ii-imeyile kubathengi abasuka kwintengiso abasebenza nabo ngoku.
Umsebenzi wokwenza ulungelelwaniso lwesihloko, ukusuka kwicandelo kunye nomzimba we-imeyile kungathatha ixesha elininzi kunye nomsebenzi wesandla ukuba awuzenzekelwanga yisoftware yanamhlanje yokuthengisa.
Ungayisebenzisa njani. Sikhethe ukubonisa ubuchwephesha obuchaziweyo obusetyenzisiweyo kwiMicrosoft Dynamics yeNtengiso, isicelo sentengiso esizenzekelayo esigubungela intengiso ye-imeyile. Xa kuyilwa i-imeyile, abathengisi bongeza umxholo onamandla odibanisa iirekhodi zabathengi. Ukulungiselela oko, basebenzisa iqhosha lokuNceda uHlelo “ ”Ifumaneka kwibar yesixhobo yokufomatha okubhaliweyo xa kukhethwa into yombhalo kuyilo lwegraphical. Inkqubo iya kutshintsha ngokuzenzekelayo umxholo onamandla ngokuhambelana nolwazi oluvela kwirekhodi lomthengi emva kokuba i-imeyile ithunyelwe.
Inqanaba eliPhezulu loLuntu
Kwinqanaba eliphambili, i-imeyile yokwenza umntu ibe ngumtshintshi womdlalo njengoko sithetha ngoku malunga nomxholo we-imeyile kumacandelo abathengi okanye kumamkeli ngamnye. Oku kubiza ukubeka idatha enkulu yabathengi kwizenzo-abathengisi banokufuna ulwazi lobuqu (ubudala, isini, indawo yokuhlala, njl.), Imbali yokuthenga, izinto ozikhethayo, kunye nomnqweno woluhlu lokwenza ii-imeyile ezixabisekileyo kubathengi.
Xa abathengisi badibanisa ukuthengwa kwabathengi kunye nembali yokubrawuza kwintengiso ye-imeyile, bahlala behambelana nomdla wabathengi kunye nomxholo ojolise kubo. Njengoko bethetha ulwimi olunye nabathengi, bona phezulungempumelelo ngakumbi. Umzekelo, abathengisi bangathumela ukhetho lwelokhwe zangokuhlwa kunye nezinto ezincedisayo kumthengi ozifunileyo kutshanje kodwa angazithengi.
Abathengisi baphumeza amaxabiso aphezulu okucofa ii-imeyile ezibhengeza abafikayo okanye imikhankaso yokuthengisa xa besenza isahlulo sabathengi kunye nomboniso izindululo ezifanelekileyo zemvelisokubathengi. Umzekelo, banokwenza ngokobuqu iphulo lokuthengisa i-imeyile yehlobo kumacandelo ababukeli nabasetyhini.
Ungayisebenzisa njani. Ukuba abathengisi banikezela ngentengiso yabo ye-imeyile kuLuhlu lweNtengiso yeNtengiso, baya kuba nakho ukufikelela ukwenziwa kwe-imeyile okuphambili. Sicebisa ukuba bacinge ngesicwangciso sentengiso se-imeyile kwaye babandakanye abacebisi beSalesforce ukuyiphumeza. Amanyathelo amabini ekufuneka uwathathe:
Yenza iZongezelelo zeDatha apho kugcinwa khona idatha yabathengi. Xa uthumela i-imeyile, inkqubo iya kuqhagamshela kwezi zongezelelo ukunika umxholo we-imeyile kumthengi ngamnye.
Yongeza umxholo wakho kwi-imeyile. Kuxhomekeka ekubeni icandelo elisekwe kwicandelo okanye umntu obhalisileyo obhalise kuye uyadingeka, iibhloko zomxholo ezinamandla okanye i-AMPscript zisetyenziswa ngokwahlukeneyo. Kwiibhloko zomxholo onamandla, abathengisi bachaza umthetho wendlela umxholo unikezelwa ngayo (umzekelo, umthetho osekwe kwisini). Oku akufuneki kubuchwephesha bobuchwephesha, ke abathengisi banokuzenzela. Okwangoku, ulwazi lwe-AMPscript, ulwimi olusisiqulatho solwimi lweNtengiso yeNtengiso ye-Salesforce, luyimfuneko yokwenza ubuwena obunobunkunkqele (umzekelo, kwiminikelo yemveliso eyenzelwe umamkeli ngamnye).
Ukwenza umntu kube lixesha elide libe ligama eliyimfihlo kwindawo yentengiso ye-imeyile. Ngelixa sizixhasa ngokupheleleyo iinjongo zeenkampani zokuphuhlisa unxibelelwano olusebenzayo kunye nabathengi nge-imeyile, sikholelwa kwindlela yokukhetha kwinqanaba lokuzenzela, elixhomekeke kuhlobo lwe-imeyile kunye nenjongo. Ke, abathengisi abadingi kulungiselela-ukwenza wonke umyalezo kunye neentloni ekuthumeleni i-imeyile ngobuninzi- ukucwangcisa kunye nokwenza ii-imeyile ezizezakho azifanelekanga kumzamo xa ulwazi olufanayo lujolise kubo bonke abathengi. Kwangelo xesha, bayaphumelela ukuthembela kwabathengi kunye nomdla xa besenza umxholo omnye nomnye kwii-imeyile ezinemveliso.
tags: ampscriptemailemail Marketingukwenziwa kwe-imeyileilifu lokuthengisazeendaba
UDenis yintloko yeCRM kunye nokuBambisana kweScienceSoft. Uneminyaka engaphezu kwe-14 yamava obuchule kwi-IT, esenza uphuhliso lwesicelo sobungcali, uyilo lweenkqubo zamashishini kunye nolawulo lweprojekthi kwiCRM, ERP nakwiiPortal Portals.